SOTRO VITA AMIN’NY AKORANDRIAKA | Rova Caviar Madagascar
SOTRO VITA AMIN’NY AKORANDRIAKA
Tsy azo ihodivirana ny fampiasana azy rehefa hihinana sy hankafy
SOTRO VITA AMIN’NY AKORANDRIAKA Isany
Hahafahana mankafy ireo « vakana mainty » miavaka, sady tsy atahorana hampiova ny tsirony, ny sotro Rova Caviar, vita amin’ny akorandriaka.
Akora mihaja avy eto Madagasikara no nanamboarana azy, ary hitondra anao hiditra ao anatin’ny tontolo hafakelin’ny sakafo haitraitra mampiavaka ny Ranomasimbe indiana.
Akora natoraly ny akorandriaka ka tsy manan-tsahala ny sotro tsirairay. Araka izany, mety tsy tena hitovy loatra amin’ny sary hitanao ato amin’ny pejy ny sotro ho azonao.
Vakan-dranomasina ny sotro Rova Caviar Madagascar ary saropady sy malefaka toy ireo atodina “esturgeon”.
Natao ao anaty paosy landihazo sy volory amin’ny lokon’ny Rova, ny sotro vita amin’ny perla dia manasa anao hanandrana fanandramana araka ny fitsipiky ny zavakanto.